Semalt Islamabad Expert: Ny zavatra rehetra tokony ho fantatra momba ny Search Engine
Ireo algorithm hafa amin'ny sariohatra fikarohana dia toa tsy ho azo tsapain-tanana, fa ny môtô dia manome fampahalalana kely momba ny fanatrarana ny vokatra tadiavina na ny kalitaon'ny kalitaon'ny fanatanjahantena tsy tapaka. Matetika, ny milina fikarohana dia manome antsika ny vaovao momba ny SEO sy ny fomba hanatsarana ny tranokalanao. Ny milina fikarohana dia programa rindrambaiko manokana izay manampy amin'ny fikarohana ireo tranonkala mifototra amin'ny teny fanalahidy izay lazainao aminy.
7) Michael Brown, manam-pahaizana ambony indrindra avy amin'ny Semalt , dia mifantoka amin'izany fa ny fitaovam-pikarohana dia mandalo ny tahirin-keviny momba ny fampahalalana ary mahita ny valiny marina ho anao. Ankoatra izay, manatontosa asa samihafa izy ireo, toy ny tranonkala mitsingevana, manangana ny endriky, ary manome ny mpiserasera lisitry ny tranonkala malaza amin'ny fikarohana sy ny teny fanalahidy. Ny fiatoana tsirairay dia ny antontan-taratasy tokana (pdf, tranokala, jpg, na hafa), ary ny karoka fitadiavana ny tranonkala manontolo mampiasa ity rakitra ity. Mametraka fijanonana feno izy ireo ary mamaritra ny hatsaran'ny backlinks amin'ny tranonkala samihafa.
Ny andraikitra roa voalohany amin'ny karoka fitadiavana dia:
1. Famaritana sy fitifirana tranonkala: ny milina fikarohana dia mitsikilo an-tserasera an-tserasera, tranonkala, lahatsoratra, lahatsary, rakitra, ary ny media.
2. Fanomezana valim-boka marina: Ny milina fikarohana koa dia manome ny valin'ny fangatahan'ny mpampiasa amin'ny endrika lisitra sy pejy manan-danja izay raisin'izy ireo sy raisiny ho tomban'ezaka.
Google sy ny fitaovam-pitadiavana hafa dia manoro ny fanarahana ny lalao tsaratsara kokoa:
2. Amboary ny tranonkalanao miaraka amin'ny sehatr'asa mazava sy ny rohy fanamarinana kalitao. Ny pejin-dahatsoratra rehetra dia tokony ho azo vakiana ary azo tratrarina ao anatin'ny rohy iray amin'ny ankapobeny..
Hita ho toy ny milina fikarohana sy ny tahiry mitovy
Tsy mitovy ny tari-dàlana sy ny fitaovam-pitadiavana, saingy ny teny roa dia mahazo laza amin'ny fotoana. Indraindray, ny olona dia misavoritaka ny fomba hanavahana ny tranonkala browsers sy ny milina fikarohana. Avelao aho hilaza aminareo fa ny milina fikarohana dia mamorona ny lisitry ny vohikalany manokana miaraka amin'ny fanampian'ny botsa sy ny sponjy. Mampifanaraka ny fampahalalam-baovao izy ireo ary manaraka ny rohy amin'ireo tranonkala mba hahazoana pejy hafa. Ireo mpitsikilo finday dia mahita ny pejin-tranonkala amin'ny alàlan'ny backlinks, noho izany dia tsy maintsy manaiky ny votoatiny amin'ny finday anaty aterineto ireo mpampiasa mba hahafahan'ny spiders sy bots dia afaka manaiky azy ireny. Tsara ny manolotra ny tranonkalanao amin'ny finday toy ny Yahoo ary manampy ny fitadiavana finday hahita ny tranokalanao.
Ahoana no hamaritan'ny fitaovam-pitadiavana ny laza sy ny lanjany?
Ho an'ny Google, Bing, Yahoo ary ny fitaovam-pikarohana hafa, ny dikany dia midika hoe mitady ny teny fototra sy fehezanteny marina. Nisy fotoana izay nanomezan'ny fitaovam-pitadiavana tamintsika angona voafetra. Ary ankehitriny ireo injeniera mahay sy matihanina dia nanamboatra ny fomba hanampiana ny valin'ny fangatahan'ny mpanjifa amin'ny fomba mahomby. Hetsika an-jatony an'arivony izao no manan-danja eo amin'ny maha-zava-dehibe izany, ary ny fitaovan'ny fikarohana dia mihevitra fa ireo tranonkala malaza indrindra dia ahitana ny angona azo antoka indrindra sy marina. Izany fahombiazana izany dia nahomby teo amin'ny fahafahan'ireo mpampiasa Google, Bing, ary Yahoo. Ny fitaovam-pikarohana dia mampiasa algorithm manokana mba hametrahana tranonkala samihafa, ary ireo algorithm ireo dia misy karazany an-jatony an'arivony. Ao amin'ny sehatry ny varotra, ireo manam-pahaizana dia manondro ireo algorithmes ho toy ny singa fototra.
Misy fitaovam-pandinihana an-taonany maro hisafidianana, fa ny tsara indrindra dia voalaza eto ambany
100 Fikarohana karoka mandritra ny 100 andro - Ireo dia fitaovam-pikarohana rehetra, olona fitadiavana olona, ​​ary ireo fitaovana fitadiavana sary. Afaka mahita azy ireo amin'ny aterineto ianao
Fomba hisafidianana ny Search Engine: Ilaina ny maka ny milina fikarohana tsara indrindra amin'ny Search Engines 101, izay fomba tsara indrindra hijerena bebe kokoa ny lohahevitry ny sehatra, andramo ny motera vaovao ary hahita ny tsara indrindra avy amin'ny tranokala manerantany.
Ankoatra ireo torohevitra sy toro-hevitra ireo, ny mpikaroka fikarohana dia nahita fomba fomba handraisana ny vaovao mifototra amin'ny laharan'ny pejy. Ankehitriny, ireo mpivarotra sy SEO dia mampiasa code sy data manokana mba hanampy ny tranonkala sy ny bilaoginy hahatratra ny toerana tsara kokoa amin'ny valin'ny fikarohana ho an'ny fikarohana . Mahagaga fa manohana ny ezaka samihafa ny milina fikarohana ary manome torohevitra mahasoa ho an'ireo mpampiasa azy. Na ireo solontenan'ny fikarohana aza dia manampy ireo webmaster sy mpitoraka bilaogy amin'ny fandraisana anjara amin'ny lahatsoratry ny blaogy, forum, ary fifanakalozan-kevitra Source .